Swe Zin Htet - MUM 2019
8th Miss Universe Myanmar "Swimsuit Round"
MUA: BSC Cosmetology
Hair Do: NK Aung Sha
Swimsuit: BSC Streamline
Shoes: BSC Shoes
Photographer: Phyo Min Zaw(Studio Paparazzi)
8th Miss Universe Myanmar "Opening Round"
Designer: Ma Ohmar Kyaw (OMK)
Makeup: BSC Cosmetology
Photographer: Phyo Min Zaw (Studio Paparazzi)
MUM 2020 - Thuzar Wint Lwin's Activity at the Shwe Yaung Hnin Si Cancer Foundation
Miss Universe Myanmar 2020 ဆုရှင် သူဇာဝင့်လွင်မှ ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်​ရေး​ဆောင်ရွက်မှုတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားရန်အတွက် ​ရွှေ​ရောင်နှင်းဆီ ကင်ဆာ​ဖောင်​ဒေးရှင်း၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ​ပါ​မောက္ခ ​ဒေါ်ရင်ရင်ထွန်း၊ ပန်း​ရောင်နှင်းဆီရင်သားကင်ဆာ လူနာ​စောင့်​ရှောက်သူများအဖွဲ့မှ ဥက္ကဌ ​ဒေ
(၈)ကြိမ်မြောက် မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီး၏ Online Live Show အခမ်းအနားကြီး
(၈)ကြိမ်မြောက် မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီး၏ Online Live Show အခမ်းအနားကြီးအား (30-12-2020) ရက်နေ့တွင် Novotel Hotel Yangon Max Grand Ballroom ၌ ပြုလုပ်ပြီး Channel Me ရုပ်သံလိုင်း၊ Channel ME Facebook Page၊ Miss Universe Myanmar Facebook Page၊ Mytel Myan
Bsc Cosmetology support MUM yearly
(၈)ကြိမ်မြောက် မယ်စကြာဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးတွင် International Brand တစ်ခုဖြစ်သော Bsc Cosmetology, Bsc Shoes နှင့် Bsc Streamline တို့မှ ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီး "Miss Healthy Skin By Bsc" Title Award ကိုလည်း ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
LET ME CHOOSE TV Program
Miss Universe Myanmar 2020 အလှမယ်လေးများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ''LET ME CHOOSE'' Challenge အစီအစဉ် Episode - 01 ကို Channel ME TV ရုပ်သံလိုင်းနှင့်အတူ Miss Universe Myanmar Facebook Page၊ Channel Me Facebook Page တို့တွင် ယနေ့ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့ ည ( ၉:၃၀
City Directors of Miss Universe Myanmar 2020
Miss Universe Myanmar 2020 ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် မြို့ကိုယ်စားပြုအလှမယ်အသီးသီးအား ရွေးချယ်မွေးထုတ်ပေးခဲ့ကြသော City Director များကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။
Thanks Letter for MUM 2019 Supporters
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Geogia ပြည်နယ်၊ Atlanta မြို့တွင် (၆၉) ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့သော Miss Universe 2019 ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်အဖြစ် ဆွေဇင်ထက်မှ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အဆင်ပြေချောမွေ့စ
Miss Universe 2019 in Atlanta, Georgia - Final Competition
Date - December 9th 2019
Time - 06:30AM [Myanmar Standard Time]
LIVE Channel - FOX, Telemundo
Website - watch.missuniverse.com [TBC]
MUM 2019 - Swe Zin Htet Swimsuit Competition
Our queen, MUM 2019 Swe Zin Htet, Superman, finished swimsuit round competition beautifully.
8th MUM Hlaing Bwe City Director - Ko Pyae Sone (Fashion Designer- Hpa-An)
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် လှိုင်းဘွဲ့ မြို့၏ City Director အဖြစ် Ko Pyae Sone (Fashion Designer- Hpa-An) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
8th MUM Kaut Ka Yeik City Director - Ko Pyae Sone (Fashion Designer- Hpa-An)
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ကော့ကရိတ်မြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် ကော့ကရိတ်မြို့၏ City Director အဖြစ် Ko Pyae Sone (Fashion Designer- Hpa-An) မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
MUM 2019 - Swe Zin Htet Today Outfit (Dream Girl)
Dress - Sai Minn Zan
MUA - NK Aung Sha
Photographer - Sai Sai Aikuu
Retouched - Zeyar Htun (DJ Photography)
MUM 2019 - Swe Zin Htet (Barbie girl)
Our MUM 2019 Swe Zin Htet is so pretty and cute with this outfit. It looks like barbie girl. This is perfect photo as background christmas tree.
Designer - Minn Thet Sean
Visiting the Atlanta Botanical Garden Lights
Miss Universe Myanmar 2019 Swe Zin Htet is visiting at the Atlanta Botanical Garden Lights with Miss universe queen sisters.
MUM 2019 - Swe Zin Htet is bright with Orange
Designer - Minn Thet Saen
8th MUM Mawlamyine City Director - Ko Kyaw Thu Ya
8th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် မော်လမြိုင်မြို့ကိုယ်စားပြု အလှမယ်ရွေးချယ်နိုင်ရေးအတွက် မော်လမြိုင်မြို့၏ City Director အဖြစ် Ko Kyaw Thu Ya (Public Relations Representative - Hmwe Business Group & Director - MM Entertainment) မှ ဆက်လက်တာဝန
MUM 2019 - Swe Zin Htet Dinner Fashion
Our Miss Universe Myanmar 2019 Swe in Htet attended dinner night and have good times together with queen Miss Universe sisters.
Designer: Win Ko
Official Exclusive Digital Partner
© 2013 - 2020 Miss Universe Myanmar. All Right Reserved.